Hihaona farany Ejiptiana vadin'ny mpanjaka manan-tantara ity lalao Cleopatra Plus sy nandeha ny fotoana milina mba hanatratra Ejipta fahiny. Kleopatra Plus dia ampahany amin'ny andian-ny Cleopatra slots natao sy mivelatra ny mpandraharaha ny iraisam-pirenena Teknolojia Gaming monina ao London. Manome ny lalao fitadiavam-bola nahasarika maro safidy ny mpilalao, ary dia toy izany no IGT no karama be avy amin'ny andian-dahatsoratra ity ny slots.
IGT dia ny foibeny any Londres sy ny lehibe anjara fanompoana ao amin'ny Providence, Las Vegas izay ny lalao Hub, ary Rome. Izany fikambanana miasa ao amin'ny mahery 100 firenena manerana izao tontolo izao ary satria nazava ny toekarena ny ambaratonga sy ny be dia be ny vola akaiky, dia manana tombony maro safidy mba hanolotra ny mpilalao amin'ny lalao namorona ny azy ireo. Ity orinasa mamokatra isan-karazany ny lalao teknolojia miaraka amin'ny slot lalao ho an'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto trano filokana.
Kleopatra Plus manana 5 reels ary 40 paylines izay nanolo-kevitra ny mpilalao. Maro ny safidy payout amin'ny endrika tombony endri-javatra ao amin'ity lalao.
Level Up Feature- Izany mamela mahazo ny mpilalao araka ny toetra sy ny faharetan'ny ny lalao dia mitendry, izay mamela azy hamaha ambaratonga ambony.
Bonus Map- Manome ny mpilalao iray mitarika sarintany izay ampiasaina rehefa Cleopatra tombony no mampandeha. Manome maimaim-poana ihany koa izany spins.
Free spins Bonus- manome 5 maimaim-poana spins amin'ny 1x multiplier
Cleopatra Bonus- Miaraka amin'ny fanampian'ny tombony Map, dia afaka mandresy ny ho 30 maimaim-poana fanampiny spins amin'ny niakatra ho any 5x multiplier na 10 Super spins amin'ny 50x multiplier. Fa izany rehetra izany dia miankina amin'ny ambaratonga efa nanokatra.
Cleopatra, satria ny bibidia sy ny stacked an'ala, mari-pankasitrahana ny loka ambony indrindra ny lalao raha afaka mahazo 5 ny azy ireo amin'ny payline. Ny stacked tampon-tanety hampitombo ny vintana ny fandresena kokoa. The 2 tampon-tanety manome 2x multiplier rehefa stacked izy ireo.
Ny lalao dia manana ny fiverenana amin'ny mpilalao isan-jaton'ny 95% izay tena mendrika.
Ny fanalahidin 'ny milalao sy fitadiavam-bola goavana payouts avy tany Cleopatra Plus no hilalao azy io bebe kokoa ho anao ny mazava tsara ny fitsipika. Ny lalao dia niezaka ny haka ny sain'ny ny mpilalao manerana na dia amin'ny sary ambany kalitao ary koa na dia eo aza ny zava-misy ny marika dia tsy tena mihaja sy ny famoronana ny mifandray amin'ny foto-kevitry Ejipta fahiny.
Queen ny harena